တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ၅-နှစ် ရှည်ကြာ ဘလော့ရွာ …
ဂျနီဗာကိစ္စက အခုမှာပဲ ကြားဖူးတယ် မမေရေ၊ ကျနော် ကြားဖူးတာက ရန်ကုန် ကမ္ဘာအေးမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံ ကျင်းပခဲ့တုန်းက မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ မေတ္တာသုတ် ရွတ်တာ (၃)အုပ်စု ကွဲနေတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်၊ မမေ ပေးတဲ့ ဆုလို
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည်စုံပြီး အဓွန်ရှည်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ တက်ဂ်ပို့စ်လေး ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ မမေရေ ...
8/31/2011 12:21 AM
စစချင်းကို ရယ်ချင်တာ.. အဆုံးထိပဲ။
မမေကို အမြင်ကပ်သည့်ထဲ မလေး လုံးဝ မပါပါ။
မြန်မာစာကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတစ်ဦးဆို နည်းနည်းတော့ ဖြုံခဲ့မိပါသည် (ကိုယ်က စာလုံးပေါင်း အလွန်မှားတတ်သူ ကိုး) ခုတော့ မဖြုံတော့ပါ.. ဟဲဟဲ။
အဲဒီနေ့တွေကို လွမ်းသွားတယ် မမေရေ...
8/31/2011 12:54 AM
သာဓု သာဓု သာဓု အဲ မမေဓါ ကလည်း လုပ်ရောမယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရလေး ဖတ်သွားပါတယ်
ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ လေး ဘုန်းပေးချင် အဲ ကန်တော့ကန်တော့ ဖတ်ချင်ပေမဲ့ မအားတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလည်း
မအားလို့ စိတ်ညစ်မနေနဲ့ အားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ပြန်သတိရနေ အဲဒီတုန်းကလည်း စိတ်ညစ်ခဲ့တာဘဲ မဟုတ်လား
8/31/2011 1:36 AM
ဆရာတော်တစ်ပါးအကြောင်း ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ၊
ကျနော် အမှတ်တရ ရေးတာကို အညာအလှူ ဘိတ်စာ လို့ဘေးက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်၊
တစ်ခါတစ်လေမှာ မိုးခါးရေသောက်ကြတာ ပျော်စရာကောင်းမှန်း သူမသိပါဘူး၊
ကိုးရက် ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်နေရတာကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါသည်၊
ကျမရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ဘလော့တွေထဲ မမေရဲ့  ဘလော့လည်းပါတယ်နော် ခုနောက်ပိုင်း ဘလော့တွေ သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့လို့ မမေ ရေ . စိတ်ထဲကတော့ အမြဲရှိနေပါတယ် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေနော်
8/31/2011 2:28 AM
အဲဒါကြောင့် ကိုမြစ်ကျိုးက ပြောတယ်
မမေက ပွဲဈေးမှာတောင် ဝတ်ရွတ်နေသတဲ့လေ.. ဟိဟိ
မမေ သိပ်တော်တာဘဲ ဘလောဂ့်ကို ၅နှစ်ပြည့်လာတာတောင် ရေးစရာတွေ များစွာနဲ့ ရေးနိုင်တုန်း၊ ရေးချင်စိတ် ရှိနေတုန်း
ကျွန်မတို့များ ဒီလောက်သက်တမ်းရှည်နိုင်ပါ့မလား မသိ...
၅နှစ်ပြည့်မှသည် ဆက်လက်ပြီးစာတွေကဗျာတွေ အများကြီးရေးကာ ဘလောဂ့် ရွှေရတု တိုင်ပါစေ...
ပျော်စရာ ဘလောဂ်ဒေး ဖြစ်ပါစေ နော်..
8/31/2011 2:57 AM
ဘလော့ဂါအပေါင်း မျက်စိညောင်း သက်သာစေဘို့ရာ စေတနာနဲ့ ဘလော့ဂ်ရွာအကြောင်းကို ရေးသွားတဲ့ အတွက် သာဓု အနုမော် သုံးကြိမ်တိတိ ခေါ်ဆိုသွားပါတယ် မေဓာဝီရေး))
8/31/2011 3:38 AM
ရှည်ပါစေ ရှည်ပါစေ ဘလော့လောကကြီးပြောပါတယ်း)
8/31/2011 4:13 AM
အပ္ပကေနပိ မေဓာဝီ၊ အလင်္ကာရေန ဘလောဂ္ဂါ။
သမုဋ္ဌာပေတိ ဘလောဂ္ဂံ၊ အဏုံ အဂ္ဂိံဝ သန္ဓမံ။
မေဓာဝီbloggerသည် တိုရှင်းသည့် သီဖွဲ့မှုဖြင့်
အော်အော်.. ကိုကိုမောင်ဝင်ခွေ့သွားတာ ဒါကြောင့်ကိုး.. ကျွန်တော်က သူကြီးဆီဝင်ပြီးမှ မမေဆီလှည့်ဝင်လာတော့ ဘာမှန်းမသိ..ဖြစ်နေတာ..း))
ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ နဲ့ ဘ၀တု သဗ္ဗမင်္ဂလံ ဘာ ကွာ ပါသလဲ…
ဟုပ် ကျတော်လည်း မမေကို ဘ၀တု သဗ္ဗမင်္ဂလံ နှင့်ပဲ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ (၅)နှစ် ဆိုတော့ (၅)ခါပေါ့။ :)
Happy blog day ပါမမရေ...
ညီမလေးတို့ကတော့ ပါဋိနေနေသာသာ မြန်မာသတ်ပုံတောင် မှားနေသူမို့ မမကို အားကျထှာ :):) ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေမမ။
8/31/2011 7:47 AM
ဘာမှ မရေးဖြစ်တာနဲ့စာရင် အခုလို ခပ်တိုတိုနဲ့ short to the point ရေးတာကလည်း အမှတ်တရ ဖြစ်စေတာပါပဲ မမေရေ..၊ ပြီးတော့ မြန်မာဘလော့ရွာကြီး တစ်ခုလုံးကလည်း မမေတစ်ယောက် အင်မတန်မှပဲ အလုပ်များနေတာကို သိထားကြလို့ ဒီလို ပို့စ်လေး တက်လာတာကပဲ ကျေနပ်စရာပါ..၊း) လာမယ့် နှစ်များစွာမှာလည်း လှိုင်းတံပိုး အမျိုးမျိုးတို့ကြားမှာ မဆုတ်မနစ် ဆက်ပြီး ကူးခတ်နိုင်ပါစေဗျာ....။
8/31/2011 8:37 AM
၅ နှစ်တောင်ရှည်သွားပြီပဲ ဒီဘလော့နဲ့ယှဉ်ရင်ကျနော်တို့ ဘလော့တွေက ပေါက်စနလေးတွေဖြစ်သွားပြီဟိဟိ အစအဆုံးအားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်ခင်ဗျ ။
8/31/2011 9:02 AM
စစတို့တော့ ကြီးမေရဲ့စာလေးတွေ ဖတ်လို့ မကုန်သေးဘူး
8/31/2011 9:29 AM
ပျော်စရာဘလော့ဒေးဖြစ်ပါစေ ကြီးမေနော်။ သာဓုပါ၊ သာဓု၊ သာဓု။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ကြီးမေရေ။
8/31/2011 11:52 AM
ကျနော်လည်း ဘလော့ဂ်သက်လေး ၂ နှစ်နီးနီလောက် ရှိလာချိန်ကစပြီး ဘလော့ဂ်တွေရောက်ရင် ရေးတာ ဘယ်လောက်ကြာလဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ နှစ်ကြာလေ အံ့သြလေးစားရလေပဲ။ တပုဒ် တပုဒ် တင်ဖို့နဲ့ တလ တလ ကျော်ဖြတ်ဖို့တောင် ခက်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခံစားပြီး ကြည့်မိတာလေ။
၅ နှစ်အထိ သက်တမ်း ရောက်လာတာ အားကျမိတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့မှ ဒီလို သက်တမ်းရှည် ဘလော့ဂ်လေး မပျက်သွားစေချင်ဘူး။ စာတွေဆက်ရေးပါ။ အလုပ်တစ်ဖက်ပေမယ့် အားတဲ့အချိန် ရတဲ့အချိန်လေးမှာ ဆက်ရေးပါအုံး။
8/31/2011 1:39 PM
အလုပ်များတဲ့ကြားက ရေးထားတဲ့ပို့စ်ကို ၀မ်းသာအားရ ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မရေ...အားမှပဲ ရေးပါဗျာ...အရင်တစ်ခါ ကျောင်းတက်နေတုန်းကလိုပဲ တင်သမျှကို စောင့်ဖတ်ဖို့က ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပါ...မြန်မာစာပေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ အစ်မမို့ လေးစားစိတ်နဲ့ တင်သလောက်လေးကိုပဲ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ဖတ်ပါဦးမယ်...အစစ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ...
8/31/2011 2:23 PM
(ဘ၀တု သဗ္ဗမင်္ဂလံ နှင့် ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ)
အပေါ်က အနောနိမတ်စ် မေးထားတာတွေ့လို့ လျာရှည်ခွင့်ပြုပါ။
ဘ၀တု သဗ္ဗမင်္ဂလံကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ပရိတ်ကြီး ပုဗ္ဗဏှသုတ်ထဲက ယူသုံးထားတာပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလုံးစုံသော မင်္ဂလာအပေါင်း ဖြစ်ပါစေတဲ့။ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်ပါစေလို့လဲ ပြန်ဆိုကြတယ်။ ဒီထက်ပိုရင်တော့ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပါစေပေါ့။ ဒီစာပိုဒ်ကိုဘဲ ဆရာတော်တစ်ပါးက မင်္ဂလာရှိပါစေ၊ မင်္ဂလာရှိအောင် နေ ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ထားတာ တွေ့ဖူးသေးတယ်။
ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံတော့ ပိဋကတ်ထဲ မတွေ့ဖူးသလိုဘဲ။ ကျမ်းဂန်မနှံ့လို့များလားတော့ မသိဘူး။ ဇေယျတု ဆိုတဲ့ ပုဒ်ကိုတောင် မတွေ့ဖူးတာ။ ဇယတုလို့ဘဲ တွေ့ဖူးတယ်။ ဇယတုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အောင်မြင်ပါစေပေါ့။
ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံကိုလဲ ဘာသာပြန်ရင်တော့ မင်္ဂလာပေါင်း အောင်မြင်ပြီးမြောက်ပါစေလို့ ပြန်ရင် ရပါတယ်။
ဘယ်လို နေရာမျိုးတွေမှာ ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွေ့ရတတ်သလဲဆိုတော့ လက်ထပ်မင်္ဂလာဘိသိသ်ပေးတဲ့အခါမျိုး၊ မောင်ရှင်လောင်း ဘိသိသ်သွင်းတဲ့အခါမျိုး၊ နောက်ပြီးတော့ အခါတော်ပေး သီချင်းတွေ ရေးတဲ့အခါမျိုး၊ မွေးဇာတာရေးမှတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခါတော်မင်္ဂလာ အယူတော်မင်္ဂလာ မွေးနေ့မင်္ဂလာ လက်ထပ်မင်္ဂလာ ရှင်ပြုမင်္ဂလာ အောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
အဲဒီ ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ အောင် သို့မဟုတ် သြောင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထည့်ပြီး အောင် ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ သို့မဟုတ် သြောင် ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံလို့လဲ အထက်ပါ မင်္ဂလာမျိုးတွေ ရေးမှတ်သီဆိုတဲ့အခါ တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဘ၀တု သဗ္ဗမင်္ဂလံဆိုတာက ကိုးကားစရာရှိတဲ့ အတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းလဲ ရွတ်ဆိုသင့်တဲ့ စကားလုံးလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ ကတော့ ရိုးရာအရ ဖြစ်ပေါ်လာပုံရတဲ့အတွက် အထက်ပါ ရိုးရာပွဲတွေလိုမျိုးမှာ သုံးစွဲတာဘဲ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇေယျတု အစား ဇယတုဆိုရင် ပိုသင့်မြတ်မယ်လို့ ထင်မြင်ကြောင်းပါ။
မစပ်မဆိုင် ကြားထဲက ၀င်ပြီး လျာရှည်ပေးလိုက်တယ်။ အနောနိမတ်စ်က ဘယ်သူမှန်း မသိပေမဲ့ ဒီအကြောင်းတွေကို သိသိကြီးနဲ့ မေးတာလား တကယ်မသိလို့ မေးတာလားဆိုတာကတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလို ရေးလိုက်ရတာကိုတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်တဲ့ အဖြေမျိုး ရှိရင်လဲ သိချင်ပါသေးတယ်။
အခုလို ဘလော့ဒေးမှာ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
မ သိ ရင် မေး − မ စင် ရင် ဆေး လို့ ဆိုထားလို့ပါ
ပါဠိ ဗဟုသုတ နည်းလို့ပါ
9/01/2011 2:08 PM
အပျော်ရွှင်ဆုံး ဘလော့ဂင်လုံး ဘ၀နဲ့
အမြဲ ထာဝရရေးနိုင်ပါစေ .
(မလုံးချင်ရင် ပြားလိုက်ပါ..စာအရလုံးမှဖြစ်မှာမို့လုံးလိုက်ပါတယ်း)
9/02/2011 2:59 AM
တွေမတက်လို့ အဲ့နေ့က အသစ်တင်သမျှ အကုန်လွတ်
9/02/2011 11:16 AM
အမ ထက်..သူများက ပိုမိုက်တယ်..
9/02/2011 5:05 PM
မမေဓာရေ...မျက်စိညောင်း သက်သာတဲ့အတွက် သောင်းသောင်းဖြဖြ သာဓုသာ ခေါ်သွားပါကြောင်း...းD
9/03/2011 5:55 AM
ကျွန်တော်က အခုမှ အမကြီးရဲ့ဘလောက်ဒ်လေးထဲကို
ရောက်ဘူးတာ ကဗျာတွေ လျှောက်ဖတ်မလို့ တဂ်ပို့စ်
ကိုအရင်မြင်လို့ ဖတ်လိုက်တာ သို့ပေမင့် သာဓု၃ ပါဗျာ။
9/03/2011 11:43 AM